मैया सुवेदीका केही मुक्तकहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका मैया सुवेदीका केही मुक्तकहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
मैया सुवेदीका केही मुक्तकहरूः
कसैसँग विश्वास घट्न थाले पछि के हुन्छ कुन्नी ?
यो कोमल हृदय लुट्न थाले पछि के हुन्छ कुन्नी ?
कैलेकाहीँ त उड्छ मडारिँदै दिल आकाशमा प्रिय
निर्दोष नैनमा मूल फुट्न थाले पछि के हुन्छ कुन्नी ?
फुल छोडेर काँडा रोजेका छौ र कहिल्यै ?
पीडा आफैँ भित्र खोजेका छौ र कहिल्यै ?
शीतका मोती हेरी रमाउने बानी तिम्रो
कतै आफ्नै भविश्य सोचेका छौ र कहिल्यै ?
निर्दोषमा खोट हाल्ने बानी पर्‍या रै’छ
झुटोमात्र बोली ढाट्ने बानी पर्‍या रै’छ ।
मैले केस्को भर परी विश्वास गर्ने हो ?
मित्रतामा भाला रोप्न बानी पर्‍या रै’छ ।।.
आफ्नै भन्दै रुवाउँने तिमी मेरो हौ कसरी ?
अन्तै माया लगाउने तिमी मेरो हौ कसरी ?
नारी अस्मिता बेच्ने नरपिचास तिमी रहेछौ
मेरो दर्दमा रमाउने तिमी मेरो हौ कसरी ?
← अमित विष्टका तीन कविता !!!